မျိုးစောင့်ဥပဒေအား ဝေဖန်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်း ~ Nge Naing
Sunday, June 23, 2013 Nge Naing 75 comments
(၂) မည်သူမဆို မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးကို လက်ထပ်မည့်သူသည် တရားဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ရမည်။ စဖတ်လာတုန်းက အကောင်းကြီး၊ ကျွန်မကို စိတ်ကုန်စေတာ အဲဒီအချက်ကနေ စပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမှန်စင်စစ်က ဘာသာတူမှ လက်ထပ်ရမယ်လို့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား ဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာ မရှိဘူး။ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်ပြီး ဘုရားနဲ့ သံဃာတော်တွေကို အင်မတန်မှ ကြည်ညိုသဒ္ဒါပွားခဲ့တဲ့ ဥတ္တရဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးရဲ့ ခင်ပွန်းဟာ ဘာသာခြားဖြစ်ပေမဲ့ သူဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီးလည်း မြတ်စွာဘုရားနဲ့ သံဃာတော်တွေကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုမပျက်ဘဲ တခါတော့ သူက ဥပုဒ်သီလ ဆောက်တည်နေစဉ် ကာလမှာ ဘာသာခြား ခင်ပွန်းကို ပြည့်တန်ဆာမ သီရိမာနဲ့ ခဏထားပြီး သူကိုယ်တိုင်ကတော့ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ သံဃာတော်တွေကို ဘာသာခြားနဲ့အတူ နေတဲ့ အိမ်မှာပဲ ဆွမ်းပင့်ဖိတ် ကပ်လှူခဲ့တဲ့ သာဓက တခုရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားလက်ထက်က နာမည်ကျော်ကြား လူသိများလှတဲ့ ကျောင်းအမကြီး ၀ိသာခါဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိမှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ခင်ပွန်းလည်း ဘာသာခြားလ်ို့ သိရပါတယ်။ ဒီတော့ ဘုရားလက်ထက်က ၀ိသာခါတို့ ဥတ္တရတို့ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးမှာ ဘာသာမတူလို့ နစ်နာစရာမရှိ ဘာသာတူဖို့ထက် မိမိကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာကို မိမိလေးလေးနက်နက် ယုံကြည်ဖို့က ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ မြတ်စွာဘုရားဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးကို ယူတဲ့အမျိုးသားဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရမယ်လို့ မဟောခဲ့ဘူးဆိုတာ သက်သေဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားတောင်မှ အမျိုးသမီးအမျိုးသား မခွဲခြားဘဲ လွတ်လပ်စွာ ထိမ်းမြားလက်ထပ် ရွေးချယ်ခွင့်အပေါ် ဘာမှ စောဒက မတက်မှတော့ အခုဒီဥပဒေကြမ်းကို ရေးဆွဲတဲ့ဘုရားရဲ့ သာဝကတွေနဲ့ ထောက်ခံတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဘုရားလမ်းစဉ်ကို မလိုက်နာနိုင်၊ ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိဘဲ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ကန့်သတ်တာဟာ အဓိပ္ပာယ်မရှိ ဖြစ်စေပါတယ်။ တခြားဘာသာတွေဖြစ်တဲ့ ခရစ်ယာန်တို့ မူစလင်တို့မှာ သက်ဆိုင်ရာဘုရားတွေက ဘာသာတူမှ ယူရမယ်လို့ ဟောထားလို့ သူတို့ရဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းမှာ ဒီလိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ပြဌာန်းတဲ့ နေရာမှာလည်း အမျိုးသမီးမှ မဟုတ် သူတို့ဘာသာထဲက အမျိုးသားကိုပဲယူယူ အမျိုးသမီးကိုပဲ ယူယူ လက်ထပ်မည့်သူဟာ ဘာသာတူရမယ်လို့ ပြောတယ်။
အခု ဒီဥပဒေမှာ အမျိုးသမီးကိုမှ ရွေးချယ်ပြီး ကန့်သတ်တယ်ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တခြားဘာသာတွေထက် ပိုပြီးအဆင့်နှိမ့်အောင် ချိုးနှိမ်ရာရောက်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ သူများဘာသာမှာ ဘုရားကန့်သတ်လို့ လူတွေက လိုက်နာရတာကို ဘုရားက ဘာမှမကန့်သတ်ထားဘဲ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာက သူများဘာသာတွေမှာလည်း ဒီလိုပဲ ပြဌာန်းထားလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်း ဒါကို အားကျမခံ လိုက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ကိုယ်ပိုင် ရပ်တည်ချက်မရှိ ဘုရားဟောနဲ့လည်းမညီ မိမိဘာသာနဲ့ သဘောသဘာဝချင်းလည်း လုံးဝမတူတဲ့ ဘာသာခြားတွေရဲ့ ပြုမူကျင့်ကြံ လုပ်ဆောင်ပုံတွေကို ပုံတူခိုးချတဲ့ သူများနောက်လိုက်တွေပဲ ဖြစ်သွားမယ် မဟုတ်ဘူးလား။
(၇) အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များကို မလိုက်နာဘဲ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးသမီးကို လက်ထပ်ခြင်း၊ ပေါင်းသင်းခြင်း ပြုပါက ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် (၁၀) နှစ် ကျခံရန် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ရမည့်အပြင် ထိုသူပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းအားလုံးကို သိမ်းယူ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအမျိုးသမီးအား လွဲပြောင်းပေးအပ်ရမည်။
(၈) ထို့အပြင် ထိုသို့ကျူးလွန်သည့် ပုဂ္ကိုလ်အပေါ် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၉၃ အပြင် သက်ဆိုင်ရာပုဒ်မတို့ဖြင့်သာ သီးခြား အရေးယူ အပြစ်ပေးအရေးယူရမည်။
(၉) ဤအက်ဥပဒေအရ ၁၉၅၄ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများနှင့် အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှုဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေကို မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးထမ်းဥပဒေအသစ် ရေးဆွဲပြဌာန်း ပြီးသည်အထိ ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။
Posted in: Women,ဘာသာရေး,ဆောင်းပါး
မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ဒေါ်စု ကန့်ကွက်ပြီ says:
June 23, 2013 at 10:03 AM Reply
"လက်ထပ်ဖို့ ဘာသာပြောင်းရမယ် ဆိုတာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ဖြစ်တယ်" လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပါပြီ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ အန်အယ်လ်ဒီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘာသာခြား ယောက်ျားတစ်ဦးအနေနဲ့ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို လက်ထပ်လိုချင်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် ပြောင်းလဲရမယ်လို့ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း သံဃာတချို့က မိန့်ကြားနေကြတာဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
"ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့ နားလည်တယ်၊ အထူးသဖြင့် ဒါတရားတော်ထဲမပါဘူးဆိုရင် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီလား၊ မလား ကြည့်ရမှာတစ်ဖက်၊ နောက်တစ်ဖက်ကလည်း ဇင်မာအောင်တို့ ပြောသလို၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လူ့အခွင့်အရေးဘက်က ကြည့်ရမှာပေါ့"
"အစိုးရဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေကို နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကို ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု ထူထောင်ဖို့လိုတယ်၊ အလုပ်သမားတွေတင်မကဘူး၊ နိုင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို စောင့်ရှောက်ရမယ်"
တဆက်တည်းမှာပဲ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းက သမ္မတအဖြစ် ဝင်ရောက်အရွှေးခံမယ်လို့ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ ပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထားကို မေးမြန်းရာမှာတော့ အခုလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုတာကို နှစ်သက်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
မျိုးစောင့်ဥပဒေကို လက်မခံကြောင်း ဆရာတော်ကြီးများ ပြော (၁) says:
June 23, 2013 at 10:32 AM Reply
မျိုးစောင့်ဥပဒေကို လက်မခံကြောင်း ဆရာတော်ကြီးများ ပြော (၂) says:
June 23, 2013 at 10:33 AM Reply
မျိုးစောင့်ဥပဒေကို လက်မခံကြောင်း ဆရာတော်ကြီးများ ပြော (၃) says:
June 23, 2013 at 10:35 AM Reply
စံပယ်ဖြူ (Jasmine White) says:
နောက်ဆုံးပိုဒ်က အကြောင်းအရာတွေကို ချွင်းချက်မရှိ လက်ခံပါတယ် အမ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ အရေးကြီးဆုံး အဲဒီအချက်ပဲ။
June 24, 2013 at 10:52 AM Reply
တစ်ချိန်က လူ့အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာ မခံနိုင်ကြလို့ အနှစ်(၂၀)ကျော် တိုက်ပွဲဝင်ကြပြီးပြီ။
အခုအချိန်က နိုင်ငံတော် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကို စည်လုံးညီညွတ်စွာ ကျရာနေရာကနေ စည်းကမ်းရှိရှိ "သူများကို မထိခိုက်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး" ကို အခြေခံပြီး လုပ်ရတော့မယ့် အချိန်ကောင်းကို ရောက်ခါမှ ဘယ်လိုမှိုင်းတွေ ၀င်လာတာလဲ မသိဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ လက်ရှိထက် ပိုမို ထွန်းကား ပြန့်ပွားတဲ့ အနေအထားကို ရောက်ဖို့က မည်သူမဆို သက်ဝင်ယုံကြည်လာအောင် မေတ္တာအခြေခံတဲ့ ကောင်းတဲ့ အပြုအမူ၊ ကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ကိုယ်ဘာသာရဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ ပန်းတိုင်ကို အရောက်သွားနိုင်တဲ့ ဝိပဿနာ ပြန့်ပွားရေးတွေ လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို မလိုက်ဘဲ လူ့အခွင့်အရေးကို ကန့်သတ်ပြီး ဘောင်ခတ်ပြီး သံဃာတစ်စုက အတင်း အဓမ္မ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာကို သိရတော့ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ရင်လေးသေးတယ်။
ဦးဝီရသူ နှင့် ဦးခင်ညွန့် အတူတကွ တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ) says:
June 24, 2013 at 12:04 PM Reply
(ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ဦးဝီရသူ နှင့် ဦးခင်ညွန့် အတူတကွ တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ) ကို လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
ဦးဝီရသူ နှင့် စစ်ထောက်လှမ်းရေးချုပ်ဟောင်း ဦးခင်ညွန့် တို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့၌ တောင်ဒဂုံတွင် "၉၆၉ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား" တွင် အတူတကွ တွေ့ရစဉ်
ကို ထက် says:
June 24, 2013 at 12:22 PM Reply
ဦးဇင်း ဦးဝီရသူ အကောင့်က စွေစောင်းတို့ စစ်ဖွတ်တွေ ဝိုင်းကြီးချုပ် ဝင်ရေးနေတဲ့ လေသံပေါက်နေတယ်။
((မျိုးစောင့်ဥပဒေကို လက်မခံဘူး)) လို့ ဆရာတော်ကြီးများ ပြောတာဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ သြဝါဒပါ။
June 24, 2013 at 12:51 PM Reply
အခုလို ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဒေါက်တာ ဓမ္မပိယ၊ ဆရာတော် ဓမ္မဒူတ အရှင် ဆေကိန္ဒကနှင့် သီတဂူ ဆရာတော် အရှင် ဒေဝိန္ဒာဘိဝံသ တို့ရဲ့ တိတိကျကျ ငြင်းပယ်မှုကို တွေ့ရလို့လဲ အားရဝမ်းသာမိပါတယ်… နောက်ကိုလည်း အခုလိုမျိုး အဆိုပြုချက်တွေကို ဆရာတော်ကြီးတွေကပဲ ပြတ်ပြတ်သားသား စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ဝိုင်းဝန်း ပယ်ချကြရင် ဦးဝီရသူ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး…
ဆရာတော်ကြီးတွေဘက်မှာ ဘုရား ရှိပါတယ်… အမှန်တရားနဲ့ မေတ္တာကို နှလုံးသွင်းသော ဆရာတော်ကြီးများ ဘုန်းကြီး၍ အသက်ရှည်ပြီး သာသနာအကျိုး ဆထက်တိုး၍ သယ်ပိုး ရွက်ဆောင်နုိုင်ပါစေ…
အမှန်အတိုင်း ဝေဖန် အကြံပြုရရင် ဆရာတော်ကြီးများကလည်း "မျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆိုတာ ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ" ဆိုတာ ရှင်းရှင်းကြီး သိနေတဲ့ဟာကို "မသိဘူး" လို့ မငြင်းဆိုသင့်ကြောင်းပါ… ဦးဝီရသူကိုလည်း သေသေချာချာ ခေါ်ပြီး ဆွေးနွေး မေးမြန်းသင့်ကြောင်းပါ… ဒါမှ နောက်နောင်ကို သာသနာ မထိခိုက်စေမှာပါ…
ဦးဝီရသူ အခုလို လုပ်ရဲတာကလည်း သူ့နောက်မှာ ကျောထောက်နောက်ခံ အစိုးရ ရှိနေလို့ပါပဲ လို့ သုံးသပ်ပါတယ်…
အရင် စစ်အာဏာရှင်တုန်းကလိုသာ ဦးဝီရသူကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ရင် ဒီဟာတွေ အကုန်လုံး ချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်…
သူရဦးရွှေမန်းကတော့ "၉၆၉ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ တချို့မှားယွင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ရပ်တန့်စေမယ်" လို့လဲ ကတိပေးထားပါသေးတယ်… စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ…
မြန်မာနို်င်ငံမှာ "လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်သောသူများရဲ့ အကြောက်လွန်သော ကာကွယ်တားဆီးခြင်း"၊ လူမျိုးတူဘာသာခြားများအား အပြစ်မြင်ခြင်းများမှ အမြန်ဆုံး ကင်းဝေးပါစေ… မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းပါစေ…
June 24, 2013 at 1:02 PM Reply
19-6-13 နေ့ထုတ် ကြေးမုံ အယ်ဒီတာ့အာဘော်မှာ ((စောင့်လေမျိုးနွယ်)) ဆိုတဲ့ အာဘော် ပါလာကတည်းက ဦးဝီရသူ ချပြထားတဲ့ ((မျိုးစောင့်ဥပဒေကြမ်း)) ဟာ အစိုးရရဲ့ အရိပ်များလားလို့ သံသယ ရှိမိတယ်...
ဆရာ ဆယ် says:
မဇင်မာအောင်၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်) ... တို့ကဲ့သို့ "အမျိုးစောင့်ဥပဒေကို လက်မခံပါဘူး" လို့ လိုင်းပေါ်မှာ ပြောနေကြတဲ့ ထေရ၀ါဒဘာသာဝင် အမျိုးသမီးလေးတွေကို "အမျိုး စောင့်ထိန်းချင်ပါတယ်" ဆိုတဲ့ သကောင့်သား မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဆဲလိုက်တာဗျာ..။ ရစရာတောင် မရှိဘူး။ ဘုန်းဘုန်း တစ်ချို့တောင် ပါသေး....
ဘာတဲ့.. "မဇင်မာအောင်၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်) တို့ဟာ... ကုလားမ တွေပါ" တဲ့..။
သြော်.. လောကကြီးများ.. မှန်တဲ့ဘတ်က ရဲရဲကြီး ဆန့်ကျင်ရင်တောင် ခေတ်ကိုက "ကုလားမ" ဖြစ်တဲ့ခေတ်....။
မျိုးစောင့်ဥပဒေ အမည်ခံ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုဥပဒေ ကို လက်မခံပါ..
June 24, 2013 at 1:36 PM Reply
ဦးဝီရသူ နှင့် ဦးခင်ညွန့် အတူတကွ တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ)
ကို ကြည့်ပြီး သတိထားမိတာက
ခင်ညွန့် အကျယ်ချုပ် ကျနေတဲ့ ၂၀၀၄ ကနေ ၂၀၁၁ နစ်ကုန်အထိ အထိ မြန်မာပြည်မှာ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း မဖြစ်တာကိုပဲ။
ဒါဟာ တိုက်ဆိုင်မှု ဆိုရင် အတော်ကို အံ့အားသင့်ဖွယ်ပါပဲ။
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက် says:
Moe Moe Cho Lwin မှန်လိုက်လေချင်း ဒီဥပဒေပြထန်းလို့ရော လိုက်နာကြလိမ့်မယ်အုံးထား မလိုက်နာတဲ့သူကို ဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်ပေးမှာလဲ သေဒဏ်ပေးမှရမှာနော်
Yesterday at 06:33 · Like · 4
Nge Naing ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Moe Moe Cho Lwin ရေးချင်စိတ်များနေလို့ ဒီအချက် ကျန်သွားတယ်။
Yesterday at 06:35 · Like · 5
Ma Oo အဲဒါကြောင့် ကန့်ကွက်နေတာ ။မှန်လိုက်သည်မှ မှန်။ဥပဒေပြဌာန်းလို့ တရားဝင်ယူလျှင်ဘာသာဝင်ကူးပြောင်းရမယ်။တရားဝင်မယူတဲ့နည်းဖြင့် တည်းခိုခန်းတွေ မှာ ချိန်းပြီးနေကြလျှင် အကျိုးနည်းဖြစ်ရချည်သေးရဲ့။
Yesterday at 06:50 · Like · 8
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက်2says:
June 24, 2013 at 10:57 PM Reply
Burmer Aung ဒီ ဥပဒေက ပြင်းလွန်းတယ်လို့ ပြောတာ ဝေဖန်တာကြားသိရပါတယ်။ ၁= ဗုဒွ့ဘာသာ အမျိုးသမီးနဲ့ ယူသော အခြားဘာသာဝင်သည် ဗုဒွ့ဘာသာဝင်တို့ ၏ ထုံလမ်းစဉ်လာ အရ လက်ထပ်မဂ်ထန်များခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ၂= ဗုဒွ့ဘာသာ ဘုရားကျောင်ကံ ရဟန်းသံဃာများနှစ် တွေ့ ဆုံခြင်းကိုးကွယ်ခြင် မိမိအိမ်မှာကိုးကွယ်ခြင်းအမူ့ ကို သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြစ်ဌင်း- အကြမ်းဖက်သောနည်းဖြစ်ဌင်း တားစီးပိတ်ပင်ခြင်းမပြုရ။ ၃=မွေးဖွါးလာသော သားသမီးများကို အဘိုးအဘွားတို့ ၏ဆနွ့ အမျိုးသမီးဆနွရှိခဲ့သော ကြည်ဖြူစွာ လွတ်လပ်စွာ ခွင့်ပြု ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ အခြားအိမ်ထောင်ရေးဖေါက်ပြန်ပါက ပိုင်ဆိုင်မူ့ အားလုံးသည် အမျိုးသမီး သားသမီးများနဲ့ သာ ဆိုင်ရမည်။ အိမ်ထောင်ရေး မပြေလည်မူ့ မူ့စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်မူ့ စသည်ကိစွ့များကြောင့် ကွါရှင်းပါက အမျိုးသမီး၏ ရပိုင်ခွင့် သုံးပုံနှစ်ပုံရှိစေရမည်။မိမိတို့ ပိုင်သော စည်းစိမ်ဥစွ့မှန်သမျှကို ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစလုံး သိရှိရမည်။မိမိဘာသာနှင့် ဇနီးသည်၏ဘာသာ နှစ်ခုအကြား အမုန်းပွားစေသော ပြောဆိုဆက်ဆံမူ့စည်းလုံးလုံချောမူ့ကိုမဖြစ်စေအောင်စောင့်ထိမ်းလိုက်နာရမည်= ဇနီးသည်၏ အပြုအမူ ရိုင်စိုင်းပါက သက်ဆိုင်ရာသို့ အသိပေးတိုင်းကြားရမည် အကြမ်းဘက် ဆိုဆုံမခြင်းမပြုရ။ ဖြစ်နိုင်ချေ အကြမ်းသဘောကို တင်ပြတာပါ။ ဒီကိစွ့တွေက တဘက်လူကို ဘာသာကို ချိုးနှိမ်ဆော်ကါးတာ။ အမျိုးသမီးအခွင့်ရေးကို ပိတ်ပင်တာ မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ် -ဘာပဲပြောပြော စည်းကမ်းဥပဒေနဲ့ဘောင်နဲ့ သွားရင် အေးချမ်းမှာပါ ဗုဒွ့ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ရဟန်းသံဃာတော်တွေကို လျှောက်ထားတင်ပြဆွေးနွေးပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်ပါတယ် ဘယ်သူမှမနစ်နာစေချင်ပါဘူးအားလုံးထိုက်တန်တဲ့ အခွင့်ရေးရစေချင်တယ်။ ကျနော့်စေသနာပါ
Burmer Aung ====ဒီလိုဖြစ်လာရတာ အခြားဘာသာနဲ့ ချစ်ကြိုက်ယူကြပြီး အနိုင်ကျင့်တော့မှ ဘုန်းကြီးကယ်ပါ တပည့်တော်မကို သနားပါဆိုလာတွေကို စိတ်မချမ်းသာရာကစတာလို့ ထင်ပါတယ် အမျိုးသမီးတွေကလဲ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ကိုယ်လုပ်ပြီး ပြသာနာတက်တော့မှ သရဏဂုံရွတ်ပွါးတတ်တာကိုလဲ ထြ့်စဉ်းစားပြီး ထိမ်းသိမ်းကြစေချင်ပါတယ် မိမိကို အကြောင်းပြုပြီး ဘာသာရေး ပြသာနာမတတ်စေခင်ပါစေနဲ့ -
Nge Naing Burmer Aung ပြောတဲ့အခွင့်အရေးတွေက အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဥပဒေအရ ရှိပြီးသား။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိတော့ ငွေများငွေနီုင် ဖြစ်နေပြီး အမျိုးသမီးတွေဘက်က တရားဥပဒေကို အကာအကွယ်ယူရကောင်းမှန်း မသိတဲ့အချက်တွေကြောင့်လည်း အမျိုးသားတွေ ချယ်လှယ်သလို ညှင်းဆဲသလို ခံနေရတာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဘာသာခြားနဲ့ ယူတဲ့အမျိုးသမီးမှမဟုတ်ဘူး မြန်မာပြည် ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ ဘာသာတူချင်း အမျိုးသမီးတွေက လင်ယောက်ျားတွေရဲ့ နှိပ်စက်ညှင်းဆဲမှုကို ခံနေရတာ အများကြီးရှိပါတယ်။
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက် ၃ says:
June 24, 2013 at 11:01 PM Reply
Thu Thu · Friends with Skyheart Winko
Yesterday at 19:18 · Like
Nge Naing လက်ခံတာ မခံတာက တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့ သဘောထားဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်လက်ခံတယ် ဆိုတာ ဘာကြောင့်လက်မခံဘူးဆိုတာ တိတိကျကျ သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီဥပဒေ ဖြစ်လာတာ အမျိုးပျောက်မှာ မူစလင်လွမ်းမိုးမှာ ကြောက်လို့ မဟုတ်လား။ အခုပေါ်မှာ ဒါတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အစွန်းရောက်တဲ့ ဘာသာအဖြစ် တွန်းပို့ပေးရာရောက်ပြီး အမျိုးသမီးတွေကို အသိတရားတွေကို ချိုးနှိမ်ထားတယ်။ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံ ရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာ အကုန်လုံးအတွက် မလွှမ်းခြုံဘူးဆိုတာတွေ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ အစွန်းလည်းမရောက် သာသနာနဲ့လည်း ဆန့်ကျင်ရာမရောက်အောင် ပညာပေးမှုတွေ ဘာသာရေးဗဟုသုတ ပေးမှုတွေနဲ့ အစားထို့ဖို့ ပြောထားပါတယ်။ အဲဒါ အတိုချူပ်ပေါ့။ ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးပြီဆိုရင် အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးထားတဲ့ အားနည်းချက်တွေအပေါ် ဘယ်လိုသဘောရလဲ။ ဒါတွေ လုပ်ပေးနိုင်ရင် ဒီဥပဒေဟာ လိုအပ်မယ်ထင်သလား။ ပြီးတော့ကော ဒီဥပဒေ ချမှတ်ထားတဲ့ သက်ရောက်လာမည့် အကျိုးအဆက်တွေက ဘာတွေထင်လဲ။ လက်ခံတဲ့သူဟာ လက်ခံတဲ့ဘက်က အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ခိုင်လုံတဲ့ အချက် ရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက် ၄ says:
June 24, 2013 at 11:11 PM Reply
Than Naing · 116 mutual friends
မငယ်ရေ ကျနော်မြင်တာလေးနဲနဲပြောချင်ပါတယ်။ဒီမျိုးစောင့်ဥပဒေကအရင်ကမရှိခဲ့ဘူး။ ပြဿနာလည်းကြီးကြီးမရှိခဲ့ဘူး။ အခြေအနေအချိန်အခါအရ ပြဿနာလည်းကြီးကြီးမားမားရှိလာတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ အခြေအနေအချိန်အခါက ဒီမျိုးစောင့်ဥပဒေလိုအပ်လာတယ်ဆိုတဲ့ စဉ်းစားချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်လာတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဥပဒေအရေးအသားမျိုးဖြစ်အောင် ဝေဖန် အကြံပေးတာ ထောက်ခံတာ ကန့်ကွက်တာတွေတော့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်တခုက ဘာသာမတူမယူရလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဗုဒ္ဒမဟောခဲ့တာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီသဘောတွေကို အကောင်းအဆိုးဟောထားတဲ့ ဗုဒ္ဒတရားတော်တွေများစွာရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များက အသေးစိတ်များစွာသင်ယူသိရှိကျင့်သုံးပြီသားဖြစ်လို့ ဒီတခုကိုတော့ကျနော်တို့ဝင်ထောက်ပြလို့ မလွယ်ကူဘူးထင်ပါတယ်
Nge Naing ကိုသန်းနိုင် တောတွင်းမှာ နေဖူးတယ်ဆိုတော့ ငှက်ဖျားလည်း ဖျားဖူးမှာ သေချာတယ်။ ငှက်ဖျားဖျားတာကို Paracetamol ပေးလို့ မပျောက်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်း သိမှာသေချာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖျားတက်နေသူအတွက် Paracetamol လိုတော့လိုအပ်တယ် ဆိုတာလည်း သိမှာပါ။ အခုဖြစ်နေတာ ငှက်ဖျားဖျားနေတယ်ဆိုတာ အမှန်တိုင်း သိတဲ့သူက Quinine Sulphate ပေးရမယ်လို့ ပြောတာကို ငှက်ဖျားမဟုတ်ပါဘူး အပူဖျားပါဆိုပြီး Paracetamol ချည်းပဲ အနင်းအကန် တိုက်ချင်နေကြတာနဲ့ တူတယ်။ Paracetamol ရဲ့ အသုံးကိုပဲ သိပြီး အဲဒါ အလွန်အကျွံဖြစ်ရင် အသည်းပျက်စီးတတ်တာကိုလည်း သိပုံမရကြဘူး။ အဲဒီ မျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုတာက အဲလိုပဲ Cause and effect ကို မသိတော့ အနာတခြား ဆေးတခြား ဖြစ်နေတယ် ကိုသန်းနိုင်။
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက်5says:
June 24, 2013 at 11:16 PM Reply
NY Hein · Friends with Cho Too and 14 others
Nge Naing ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်အောင် မိမိဘာသာရဲ့ တန်ဖိုးကို နားလည်ပြီး တန်ဖိုးထားတတ်အောင် တခြားဘယ်သူမှ ဖျက်လို့မရအောင် လုပ်ပေးရမည့်အစား ဥပဒေနဲ့ ဘောင်ခတ်ထားတဲ့နည်းက လုပ်ရပ်မှန်တယ်လို့ ထင်တား။ ယုံကြည်မှုကို ဥပဒေနဲ့ လှောင်ပိတ်လို့ရနိုင်မလား။ အဲလိုလုပ်တာ ဘုရားဟောနဲ့ ကိုက်ညီလား။ အဲဒါတွေကို ထည့်တွက်စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်တယ်။
Nge Naing မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သာသနာမပျက်သရွေ့ တရားဓမ္မတွေကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ရင် မြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်ကအတိုင်းပဲ အကျိုးများတယ်လို့ ဘုရားက ဟောထားခဲ့ပါတယ်။ သာသနာ မပျက်အောင် လုပ်ဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ သာသနာမပျက်အောင် ဘယ်နည်းနဲ့လုပ်မလဲ ဘုရားကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်မလား ဘုရားဟောနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်မလား။ ဒါကိုပဲ ရွေးရမှာဖြစ်တယ်။ ဘုရားသာသနာ တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့အတွက် ဘုရားဟောတွေကို မျက်ကွယ်ါပြုပြီး အတင်းဓမ္မလုပ်တာ လူသတ်တာတွေလုပ်ပြီး သာသနာမတည်တံ့နိုင်ဘူး သာသနာ ပျက်စီးဖို့လမ်းကိုပို နီးကပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက် ၅ says:
June 24, 2013 at 11:20 PM Reply
Burmer Aung ဝိနည်းဟာ ရဟန်းတို့ ၏ အသက်ဆိုတာ သိမ်ဝင် ရဟန်ခံတဲ့ ရဟန်းတိုင်းသိတာပေါ့။ ကံငါးပါးထိန်းရမယ်ဆိုတာ ဗုဒွ့ဘာသာဝင်တွေသိမှာပေါ့ ။ ဘုရားလက်ထက်မျက်မှောက်မှာတောင်၊ ဖေါက်ကြတာရှိပါတယ်။ ရဟန်းတိုင်း ဝိနည်းနဲ့ မညီသလို၊ ဗုဒွ့ဘာသာဝင်တိုင်း ငါးပါးသီလမမြဲကြပါ။ ရဟန်းဝိနည်း ကျိုးပေါက်ရခြင်းအကြောင်းတရားတွေအများအပြားရှိပါတယ်။ ==လက်တွေ့ အဖြစ်တခု ၊ ကျနော် ၈၈ကါလနောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရကိုရှောင်တိမ်းရင်း မိုးကောင်ဘက်တော မှာ နေရင်း စေတီတဆူမှာ တရားထိုင်ပါတယ် မထင်ရှားအောင် သင်ကန်း အမဲကြီးနဲ့ ပေါ့ သိပ်မကြာဘူး ဝိဇွ့ာကိုတော်ဆိုပြီး လူအများ ဂဏန်းတောင်းကြတယ်၊ ကျောက်စိမ်းတွေယူလာပြီး ဈေးကောင်းရအောင် သိဒွိ့တင်ခိုင်းတယ် ကျနော်လဲ ကြာကြာမနေရဲတော့ပဲ လစ်ရတယ်။ ဆိုလိုခြင်းက ရဟန်းတွေကို ဝိနည်းမညီးဘူးဆိုတာလောက်နဲ့ တော့ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ။ ကာလပရောဂါကြောင့် သာသနာမပျက်စီးသောလဲ ၊ ဥင်းနေရာ- ဒေသ တိုင်းပြည် မြို့ ရွါ တွေမှာ ပိုင်းခြားပြီး သာသနာပျက်စီးကြောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါကို ဘုရားဟော တရားနဲ့ အညီ ကါကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုပြီး တထစ်ကျမှတ်ယူလို့ မရပါ ဌင်းဒေသ၏ ပယောဂါကို ပယ်ရှားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကိုလဲထဲ့တွက် စဉ်းစားပြီး လုပ်ဆောင်ရပါတယ်၊ ကျွဲတကောင် ပြေးခပ်ချိန်မှာ ဘုရားဟောတရားနဲ့ အညီ မေတ်တာပို့ ရပ်နေပါလို့ ပြောရင်တော့ ။ ဝိနည်းတော်အတိုင်း သေပွဲဝင်လိုက်တော့လို့ ဆိုရမှာပဲ ။
ယော ဘုရားဟော ဘုရားဟော ဘုရားဟောကိုဘယ်အတိုင်းအတာထိသိပြီးဘယ်အတိုင်းအတာထိကျင့်ပြီးပြီလဲသိချင်စမ်းပါဘိ
ကျွန်တော်မေးပါရစေ ဘာဖြစ်လို့ဥပဒေဆိုတာဖြစ်လာရတာလဲ ဥပဒေဟာ သူတပါးရဲ့ယုံကြည်မှု့ကိုလွတ်လပ်စေတတ်သလား ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်တရားကိုသွေဖီပြီးကိုယ်ရဲ့ကျင့်သုံးမှုတွေကညံ့ဖျင်းနေခဲ့လို့ဥပဒေနဲ့အစားထိုးပြီးယုံကြည်မှု့တွေချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့စတေးလိုက်ရတယ် ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာတောင်လွတ်လပ်စွာပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရုတ်သိမ်းပြီးဥပဒေတွေသတ်မှတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ် ချစ်သားတိုဤအရာသည်လုပ်ထိုက်၏ဤအရာသည်မလုပ်အပ်ဆိုပြီးသြဝါဒပါတိမောက်ကိုပြပြီးလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြလို့ ဒါလုပ်လျင်ဒီပြစ်ဒါဏ် ဟိုလုပ်ရင်ဟိုအပြစ်ဒါဏ်ဆိုပြီးအာဏာစက်နဲ့ပါတိမောက်ပြခဲ့ရပါတယ်
Burmer Aung ဟုတ်ပါတယ် ပုဂွိုလ်ကို အကြောင်းပြုပြီး ထုပ်ရတဲ့ ဝိနည်းတော်တွေကလဲ မနည်းပါဘူး။ ကါလဒေသအလိုက် ပယ်သင့်သောဥပဒေ ဖြည့်စွတ်ပြီးလိုက်နာရမဲ့ ဥပဒေဆိုတာလဲ ဘုရာကိုတိုင်ခွင့်ပြုထားပါသေးတယ်၊ ဥပမာ သြခိတွစကွု့ လေးတောင်ပမာနအတိုင်းအရှည်ထက်မကျော်လွန်ပဲ ရွာတွင်း မြို့ တွင်းနိုက် မသွားရဆိုသည်မှာ ကါးတဝီဝီ ဖြတ်မောင်းနေတဲ့လမ်းဖြတ်အကူးမှာ အနုဇာနာမိ ခွင့်ပြုပြီး အနွရယ်ကို ကြည့်ခွင့်ရှိပါတယ်။
Nge Naing ကျွန်မ အပေါ်မှာ ပြောထားပြီးပါပြီ။ ဒီဥပဒေဟာ အနာတခြား ဆေးတခြား ဖြစ်နေတယ်။ သာသနာကို ကာကွယ်ဖို့ တခုခုလုပ်တော့လုပ်ရမယ် ဒါပေမဲ့ ဒီအတိုင်းလုပ်လို့မရဘူး။ ဆိုးကျိုးပဲ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ဥပမာတွေလည်းပေးထားပါတယ်။ သာသနာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် မိမိအတွင်းစိတ်က ယုံကြည်မှု သဒ္ဒါတရား၊ အကျင့်သီလနဲံ့ ဘုရားဟောတဲ့ တရားဓမ္မကို ခိုင်လုံအောင် ရင်ထဲရောုက်အောင် အသိပညာမပေး မလုပ်ပေးဘဲနဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ လင်ယူသားမွေးကိစ္စကို လိုက်ကန့်သတ်တာနဲ့ သာသနာက တည်တံ့သွားပါ့မလား။ ကို Burmer Aung အခုက အဲဒီ ကျွဲလိုက်တဲ့ ဥပမာလောက်တောင် အထွပ်ထိပ်ရောက်အောင် အရေးကြီးနေပြီလား။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သမီးပျိုး ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းက မူစလင်နဲ့ ယူဖို့ အစီစဉ်ဆွဲထားတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူက သုတေသနပြုထားလို့လဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲနဲ့ ရူကြောင်ကြောင်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလို့ ဘာသာခြားတွေကတော့ ဟားတိုက်ရယ်နေမှာ သေချာတယ်။
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက် ၆ says:
တခုခုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကာလလေးမှာသမီးပျိုလေးတွေရဲ့ဘဝတွေဘယ်လောက်စတေးခံလိုက်ရပြီးလဲကိုယ်အလှည့်ကျဖို့ထိုင်စောင့်နေတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါ ဒီအတိုင်းလုပ်လို့မရတော့ဟိုအတိုင်းလူပ်နေတာကိုဝေဖန်မစောပဲစောင့်ကြည့်ပါဦးလား လုပ်ရမှာကိုသိရက်နဲ့မလုပ်ပဲထိုင်နေမဲ့အစား လုပ်နေတဲ့သူအများကိုကျေးဇူးမတင်တောင်အပြစ်မဖိုမိပါစေနဲ့ဗျာ
Nge Naing လုပ်နေတဲ့သူတွေက လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို မလုပ်ဘဲ ရောဂါတခြား ဆေးတခြား ဖြစ်နေတာကိုတော့ မပြောလို့မရဘူး။ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ မုန်းတီးရေးနဲ့ လုပ်လို့မရဘူး။ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဆိုတာ ရှိတယ်မဟုတ်လား။ အကြောင်းရင်းမှန်ကို သိအောင်အရင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ရမ်းကုနေရင် ရောဂါပျောက်ဖို့မရှိဘူး။ အဲဒါကြောင့် ရောဂါကိုသိအောင် အရင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ရောဂါသိတဲ့သူတွေ အကြံ့ပုပြောပြထောက်ပြတာကို မျက်လုံးအသေမှိတ်ပြီး စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ သွားရင် ရှေ့မှာ ချောက်လည်း ရှိနိုင်တယ် တွင်းလည်း ရှိနိုင်တယ် ဆူးလည်းနင်းမိနိုင်တယ်။ ပြောတော့ ကုလားမုန်းတယ် မုန်းတယ်ဆိုပြီး ကုလားလုပ်တာ အကုန်လုံး ပုံတူလိုက်ခိုးချနေတာကမှ သာသနာပျက်ဖို့ကိန်းပိုဆိုက်ရောက်သွားနိုင်တယ်။
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက်7says:
June 24, 2013 at 11:30 PM Reply
Burmer Aung ရဟန်းတော်တွေက အကြောင်းမဲ့ မုန်တီးရေးနဲ့ မလုပ်ပါဘူး .အမျိုးသမီးတွေက မကြာမကြာ ငိုယိုပြီး ရဟန်းတွေကို လျှောက်ထားကြလို့ သာ ဒီကိစွ့ပေါ်လာတာပါ - ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံမယ်ဆို ရဟန်းတွေကို လာပြီးလျှောက်စရာမလိုပါဘူး။ ရဟန်းတွေကလဲ ကိုယ့်အလုပ်ပျက်ပြီး ပင်ပန်းခံပြီးလုပ်စရာမလိုပါဘူး ဖြစ်နေတာတွေ ပြန်သုံးသတ်ကြည့်ပါ။
Burmer Aung ရောဂါတခြားဆိုတာကတော့ အမြင်အားဖြင့်တော့မှန်ပါတယ်၊ ဖြစ်နေတာက ဥူးနောက်ထဲ ပိုးဝင်စွဲနေပါပြီ အမရယ်။
ကာမလူသားတွေအတွက်ကာမဂုဏ်တရားဟာသောက်လေသောက်လေငတ်မပြေနိုင်တဲ့ပင်လယ်ရေကြီးပါ ရုပ်ဝတ္ထုတွေဆန်းပြားစွာပေါများနေတဲ့ယနေ့ခေါတ်ဆိုတဏှာရဲ့အလိုကိုအသင့်အတင့်မသုံးဆောင်နိုင်ကြတော့လွန်ကဲစွာအသုံးတော်ခံလာရမှု့တွေကြောင့် ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကမသိမသာလူအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ပြီး ကွန်ဒုံးစက်ရုံတွေတည်ထောင်ဖြန့်ဖြူးရသည်အထိရုပ်ဝတ္ထုတွေဆန်းပြားလာတာကိုသတိပြုမိနိုင်ပါစေ
Nge Naing ဒါအစိုးရတာဝန်ပျက်ကွက်လို့ ဖြစ်ရတာ။ ဒါဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိလို့ ဖြစ်ရတာဆိုတာ အပေါ်မှာ ပြောထားတာရှိပါတယ်။ အဲလို တိုင်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စ လုပ်နေတဲ့ စပ်ကူးမတ်ကူးကာလမှာ သမီးပျိုတွေ အားလုံးက ကုလားမယားဖြစ်ဖို့ပဲ တာဆူနေကြကုန်ပြီလား။ ဘာဖစ်ြလို့ ဒီလောက်တောင် ရေးကြီးခွက်ကျယ်ထလုပ်နေရတာလဲ။ ဒီထက်အရေးကြီးတာတွေ အရင်လုပ်ရမည့်ဟာတွေကို ထားပြီး ကုလားဥပဒေကို အတုခိုးတဲ့ ဥပဒေ ရှားရီဟတ်နဲ့ ဆင်တူတဲ့ ဥပဒေကို ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင် ခိုးချချင်နေရတာလဲ။
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက် 8 says:
June 24, 2013 at 11:45 PM Reply
Nge Naing မဆိုင်တာမပါစေပါနဲ့။ ကွန်ဒွန်သုံးတာက ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး ရောဂါလည်း ကာကွယ်တယ် မလိုလားအပ်တဲ့ သနွေကိုလည်းတားပေးတယ်။ မိသားစုစီမံကိန်း family plan ကို ကောင်းကောင်း ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကပိုမှ ဘာမှမထိခိုက်ဘူး။ ဘယ်သူ့အခွင့်အရေးကိုမှ မထိခိုက်ဘူး ဘယ်သူ့ကိုမှ မုန်းတီးမှုမရှိဘူး။ ဒါလောကီလူသားတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့အရာကို ကျန်းမာရေးရှုဒေါင့်ကရော လူမှုရေးရှုဒေါင့်ကပါ အထောက်အကူပြုနေတဲ့အရာ ဖြစ်တယ်။
Nge Naing ဘာသာခြားနဲ့ မယူဖို့ တားတဲ့ကိစ္စဟာ ဥပဒေနဲ့ ဘာမှပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ သဘောမတူတဲ့ မိဘတွေက ကိုယ့်သားသမီးကို ဆုံးမဖြောင်းဖြ ပြောပြရမည့်ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအတွက်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘာဥပဒေမှ မလိုအပ်ဘူး။ ပြောပြလို့မရလို့ သူယူရင်လည်း သူ့ကံကြမ္မာကိုသူဖန်တီးတာပဲ ဖြစ်တယ်။ ကံသည်သာ မိမိကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်လို့ ဘုရားဟောထားတာပဲ။
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက်9says:
June 24, 2013 at 11:48 PM Reply
Nge Naing အခုပြောနေတာတွေ အားလုံးကပတိအခြေအနေတွေသာ ဖြစ်တယ်။ လုပ်ကြံဖန်တီးပြောထားတာ တခုမှမရှိဘူး။ ကုလားမယား ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းက မိမိကိုးကွယတဲ့ မိမိဘာသာရဲ့ ဗဟုသုတနဲ့ ယုံကြည်မှု သဒ္ဒါတရားနည်းတာ ဆင်းရဲကြပ်တည်းတာတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကို သက်လုံကောင်းအောင်မလုပ်ဘဲ ကုလားမုန်းတယ် လည်းပြော ကုလားရန်ကိုကာကွယ်တယ်လည်းပြောပြီး ကုလားဘာသာက ဥပဒေအတိုင်း ပုံတူခိုးချြ့ပီး မိန်းမတွေအတွက် ကန့်သတ်ချင်နေတာလည်း အမှန်ပဲဖြစ်နေတယ်။ ဒါကိုပဲ ထောက်ပြနေတာဖြစ်တယ် တခြားဘာမှ အပိုလိုရာဆွဲပြောနေတာမပါဘူး။
Burmer Aung ကံရုံပြီး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး ဆူပုံထဲ ခုန်ချတာ အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး ကယ်ကြပါအုန်းဆိုတော့လဲ ရွာဆူသွားရတာပေါ့အမရယ်။
Nge Naing အဲဒီအတွက် ဥပဒေက ရှိပြီးသားပါလို့ ကျွန်မ အပေါ်မှာြေုပာပြီးပြီ။ အမျိုးသမီးတွေ မိမိအခွင့်အရေး မိမိသိအောင် လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ ပြောထားတာ ရှိပါတယ်။
Nge Naing [ဟုတ်တယ် အာဂျင်တာ လွဲတာတွေ ပြောနေမည့် မပြောတာက ပိုကောင်းပါတယ် NY Hein.
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက် 10 says:
Blackiron Man တနွယ်ငင် တစင်ပါလာရင်းနဲ့ငါတို့ဘာသာပျောက်ကွယ်သွားမှာစိုးလို့ တားနေရတာ ဒါက အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကာကွယ်တာ
Nge Naing သာသနာပျောက်မှာ ကြောက်ရင် မူစလင်မိန်းမတွေကို တားမြစ်ထားတဲ့ ဥပဒေအတိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးတွေအတွက် အတုခိုးပြီးလိုက်လုပ်ဖို့မလိုဘူး သာသာနာပျက်မှာကြောက်ရင် ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ မှတ်ချက်ထဲမှာရော ပို့စ်ထဲမှာပါ ကျွန်မ ပြောထားတာ အများကြီးဖြစ်နေပြီမို့ ထပ်မပြောတော့ဘူး။
Ma Oo ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာသာ၎မျိုးရှိတယ်။ဘယ်တော့မှ မပျောက်ဘူး။ပျောက်အောင်လဲ လုပ်မရပါဘူး။
Burmer Aung အခုလုပ်နေတာ အမြင်အားဖြင့်တော့ လက်တလောမသိကြတာကိုမပြောလိုပါ ဒီကစွ့က အခြားဘာသာအမျိုးသမီးတွေလဲ ချုပ်ချယ်မဲ့ ကလွတ်မြောက်ဘို့ အခွင်ရှိလာမှာသေချာတယ်။ ကလေးမွေးတုန်းခနတော့ ဝေဒနာ ဆိုးဝါးတာခံရပေမဲ့ မွေးပြီးရင်။ အလွန်ဝမ်းသာတာပဲမဟုတ်လား။
Nge Naing ကိုဗမာအောင် Birth Control Program က သီးသန့်လာလိမ့်မယ်။ ဒီကိစ္စကလည်း ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ အစိုးရရယ်၊ ကျန်းမာရေးဌာနရယ်လုပ်လိမ့်မယ်။ အဲဒါနဲ့တော့ ရောမချပါနဲ့ Agenda ထဲကအကြောင်းကိုပဲ ပြောပါ။
Burmer Aung ဥပမာပေးတာပါ ၊ အစိုးရကိုအားကိုးရင်လာပါမယ်မျှော်ပေါ့အမရယ်။
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက် 11 says:
June 25, 2013 at 12:00 AM Reply
Lin Let Kyal Sin မှားယွင်းနေတဲ့ တစ်ခြားဘာသာရဲ့ ပြဌာန်းချက်တွေကို မြင့်မြတ်သော ညီမတို့ သာသနာက လိုက်ယောင်နေတာကို သိပ်လက်မခံနိုင်တာပါ .. ။ အချက်အလက်စုံစွာ ရေးသားပေးတာ ကျေးဇူး မမ
Nge Naing အစိုးရကောင်းတခုပေါ်လာဖို့အတွက် စပ်ကူးမတ်ကူးကာလမှာ ၀ိုင်းပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီ လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရှိတဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်လာပြီး တိုင်းပြည် တိုးတက်အောင် ကြိုးစားပေးရမည့်အစား မူစလင် မုန်းတယ်လည်းပြောသေး မူစလင်အမျိုးသမီးတွေကို ဥပဒေနဲ့ ထိန်းချူပ်ထားတဲ့အတိုင်း အားကျပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးတွေကို ထိန်းချူပ်တဲ့ ဥပဒေပြုပြီး ကြိုးစားရင်း အချိန်ကုန်နေကြတာကိုက မဟုတ်တဲ့အလုပ် ဖြစ်တယ်။ အဲဒါက ထောက်ခံတဲ့လူတွေကို ပြောတာ။
Kyi Kyi Khin ဘာသာတရားကို ဥပဒေနဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာ ကိုယ့်ဘာသာကို အထင်သေးတာ။ ကိုယ့်ဘာသာကို လူတွေ ရင်ထဲ ခိုင်မာအောင် မလုပ်နိုင်တာ ကို ၀န်ခံတာ။ ရင်ထဲမှာ တကယ်ယုံကြည်ချက် ခိုင်မာရင် ဘာဥပဒေမှမလိုဘူး။ ရင်ထဲက ယုံကြည်ပြီး ကိုးကွယ်နိုင်အောင် သာသနာ ပြုကြဖို့ ကြိုးစားကြရမှာကို မလုပ်ပဲ တလွဲတွေ လိုက်လုပ်တာ ပဲ။
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက်12 says:
urmer Aung ဦးဝီရသူပြောတာ မှတ်မိသလောက်ပြန်ပြောပြမယ် ဟူစိန်ကို ဖန်းစီးတာ သေဒါဏ်ပေးတာ လူမပါတဲ့လေယဉ်နဲ့ ဗုံးကျဲတာ အဖကန်ကိုတိုက်တာ ဘင်လာဒင်ကိုပစ်သတ်မိန့် ပေးတာ အစရှိသည်ပေါ့ အမျိုးသားရေးကို အိုဘားမားကါကွယ်တာတဲ့ -ဝီရသူ စာရေးတာ တရားဟောတာ အမျိုးသားရေးကွါကွယ်တာတဲ့၊ ဘယ်သူက အကြမ်းဘက်သလဲတဲ့၊ ဘယ်သူက လူ့ အခွင့်ရေးချိုးဖေါက်တာလဲတဲ့ ။သူဘယ်သူကိုမှာ စွတ်စွဲတာမပါဘူး။ မျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုတာလဲ- အမျိုးချစ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာပါ အမှန်အမှားဆိုတာတော့ ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးရမှာပေါ့။ . အရှင်အရဟျွှံရားနာပြီးတော့ အနော်.ထာမင်းက အရေးကြီးတွေကို အရေးယူပြီး မင်ပစ်မင်းဏ်ပေးတယ် အရေးကြီးသာသနာပျောက်လို့ပုဂံဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမူ့ ကြီး ထွန်းကါးတာဒီနေအထိပေါ့ ။ အကယ်လို့ သာ အရှင်အရဟံကလဲ မျက်ကွယ်ပြုမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အနော်ရထာမင်းကလဲ မနာခံဘူးဆိုရင် ဒီကနေ့ အထိ -ပန်ဦးဆက် သာသနာ၊ သားဖေါက်သနာကို လက်ခံရုံကြည်နေမှာပါ။
Nge Naing အဲဒါပဲ ကို Burmaer Aung အပါအ၀င် တချို့တွေဟာ လူ့အခွင့်အရေါ်ဆိုတာ နားမလည်ဘူးဆိုတာ အမှန်ပဲ။ အဲဒါက လူ့အခွင့်အရေးနဲ့မဆိုင်ဘူး သူ့အစိုးရကို ထိပါးလို့ သူလုပ်တာ။ ဒီဒီဥပဒေက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထိမ်မြားလက်ထပ်ပိုင်ခွင့်ကို တားမြစ်တာ မတူဘူး။ ကိုဗမာအောင်။ အမှားမှန်ဆိုတာ ဆွေးလည်းဆွေးနွေးတာ တကဏ္ဍ အခုဒါကိုကျတော့ ဒီလောက်တောင် ဆွေးနွေးစရာမလိုဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံထားတော့ ဓမ္မနဲ့ ကိုက်မကိုက်ကို ကြည့်လိုက်ရုံပဲရှိတယ်။
Burmer Aung ဘာသာတရားကို ဥပဒေနဲ့ ထိန်ချုပ်ထားတာတွေ အမ-မသိသဘူးထင်တယ် -ကမွာပေါ်ဘာ သိသာထင်ရှားတာ မထင်ရှာတာပဲကွါပါလိမ့်မယ် ဥပဒေနဲ့ လွတ်ကင်းပြီးဘယ်ဘာသာမှ မရှိဘူး အခြားဘာသာတွေပါလာမှာ မလိုလားလို့မပြောတော့ဘူး-အသေးစိတ်လေ့လာကြည့် ပါအမရယ်။
Face Book မှာ ဆွေးနွေးချက် 12 says:
Burmer Aung အခွင့်အရေးတွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကိုစော်ကါးတယ်အမြင်တွေနဲ့စိတ်မထိခိုက်ကြပါနဲ့။ ကျနော်တို့ ၁၀ယောက် ၁၂ယောက်စုနေတဲ့ တချိန်က ခနခန အခိုးခံရလေတော့ ။တခါမှာ ကျနော်က အားလုံးရဲ့ သေတာကို ရှာမယ်ဆိုတော့ -တချို့ က စိတ်ဆိုးတယ် ဒါဆော်ကါးတာပဲတဲ့ ။တချို့ ကပြောတယ် ကိုယ်မခိုးရင်ပြီးတာပဲ ကြိုက်သလိုလုပ်တဲ့၊ကျနော်လဲ အမုန်းခံပြီးရှာလိုက်တော့ သခိုးကိုတွေ့ တယ်။ ခိုးတဲ့သူကို တရားချပြီး မင်းတို့ အထဲကသွားတော့ ။ ပြောချင်တာက ကိုယ်က အမျိုးဘာသာကို ချစ်မြတ်နိုးတာခိုင်ရင် ဘာသိကွ့မှာကျစရာမလိုပါ ။ အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမေးဘူးတယ် -သူတို့ ဘာသာ ၁၀နှစ်မကလို့ သေဒဏ်ပဲပေးပေး ကျမကတော့ ပြတ်တယ် မိမိကိုကိုရုံတယ်တဲ့၊
Nge Naing ကိုဗမာအောင် အခုပေးတဲ့ ဥပမာရော အရင် ပေးတဲ့ ဘင်လာဒင်ကိုဖမ်းတဲ့ ဥပမာမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်တာ တခုမှမပါဘူး။ အခုပြုထားတဲ့ ဥပဒေက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်တဲ့အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပုံရိပ်ကိုပါ အကျည်းတန်စေတာ။ ကိုဗမာအောင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ နားမလည်သေးဘူးဆိုတာ လက်ခံလိုက်ပါ။ ဒီအခန်းထဲမှာ ပစ္စည်းပျောက်လို့ ဒီလူတွေဆီက ပစ္စည်းရှာတာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်တာ မဟုတ်ဘူး။
Nge Naing တချို့ကလည်း တရားဘက်ကလိုက်မလား လူ့အခွင့်အရေးဘက်က လိုက်မလားလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးတွေ့တယ်။ နားမလည်ပါးမလည်နဲ့ ဗုဒ္ဓတရားကပဲ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ထားတဲ့ တရားလိုလို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘာမှန်းမသိ ကိုယ်စီးတဲ့မြင်း အထီးမှန်းအမမှန်းမသိတဲ့သူတွေကလည်း အများကြီး။ Universal Declaration of Human Rights အချက်သုံးဆယ်ထဲက အချက်သုံးဆယ်ထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့အချက် ဘယ်အချက်ရှိလဲဆိုတာ ရှာကြည့်ကြည့်ပါ။ ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာ ဘာသာခြားတွေကတောင် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ကိုက်ညီမှန်းသိကြတဲ့အချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတချို့နဲ့ လူတချို့က ဒါကိုမသိဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကပဲ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်တဲ့ ဘာသာထဲမှာပါသလိုလို ထင်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ဖို့ ဥပဒေကို အမွမ်းတင်ပြီး ပြောနေကြတာ ရှက်စရာသိပ်ကောင်းပါတယ်။
ဘာသာဘက်ကလိုက်မလား လူ့အခွင့်အရေးဘက်က လိုက်မလားနဲ့ နားမလည်ပါးမလည် မေးနေကြတဲ့သူတွက် ပြောတာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ လူ့အခွင့်အရေါ်နဲ့က ဘက်နှစ်ဘက်မှမဟုတ်တာ တဘက်တည်းမှာ ရှိနေတယ်။ ဟို.. သူများဘာသာကို ခိုးချပြီး ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေကမှ တခြားစီဖြစ်နေတာ။
June 26, 2013 at 6:23 AM Reply
မငယ်နိုင် ရေးတဲ့ "မျိုးစောင့်ဥပဒေအား ဝေဖန်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်း" ကို ဖတ်ဖြစ်တယ်..။ ကြိုက်တယ်။
ဦးတည်ချက်က တခုပဲ ရှိပါတယ်။ မျိုးစောင့်ဥပဒေကို တကယ် ပြဌာန်းလိုတာမျိုး မဟုတ်ပဲ ... မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ကန့်ကွက်မယ့် လူ အပေါ်မှာ ... အပြစ်ရှာလို့ ရအောင် လုပ်ထားတာလို့ မြင်ပါတယ် ...
အသိနည်းတဲ့ ပြည်သူအများစုကို ဒီနည်းသုံးပြီး စည်းရုံးရတာ ပို လွယ်တယ်လေ။
June 26, 2013 at 12:49 PM Reply
"အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အတွက် လုပ်နေတယ်၊ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ထုတ်မယ်" ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေဟာ တကယ်ကို အရပ်သားအယောင်ဆောင် စစ်အုပ်စုရဲ့ အသုံးချခံလိုက်ရတာပါဗျာ။
အာဏာကို လက်မလွှတ်ချင်လို့ တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ အရှုပ်အထွေးအမျိုးမျိုး ဖြစ်လာအောင်၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းတွေ မဖြစ်ရင် ဖြစ်အောင်၊ စ ဖြစ်လာရင် ပို မကြီး ကြီးအောင် ယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့ အောက်လမ်းနည်း၊ ကလိမ်ကကျစ်နည်း အမျိုးစုံ သုံးပြီး တမင် လုပ်နေတဲ့ အရပ်သားအယောင်ဆောင် ကြောင်သူတော် သိန်းစိန် စစ်အုပ်စုရဲ့ အသုံးချတာကို ဘုန်းကြီးတွေ ခံနေရတာပဲဗျာ။
စစ်အုပ်စုက သံဃာထုအတွင်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကတဲက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မြှုပ်ထည့်ထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဘုန်းကြီးတွေကတော့ သူတို့အလုပ်ကို သူတို့ အကွက်စေ့စေ့ လုပ်နေကြတာပဲ။
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အတွက် လုပ်နေတယ်၊ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ လုပ်နေတယ် ဆိုတဲ့ အသံကောင်း ဟစ်သံတွေကို အဟုတ်မှတ်ပြီး အနောက်က ပါလာကြတဲ့ မသိ နားမလည်တဲ့ သံဃာ နဲ့ ပြည်သူတွေဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့ ထောင်ခြောက်ထဲကို တည့်တည့်ကြီးကို ဝင်တိုးနေကြတယ်။
"ကျော်ဟိန်း ကောင်းစားဖို့ အံ့ကျော် က လူမိုက် လုပ်ပေးနေတာ" လို့ ဦးဝီရသူ ပြောတာက ဘာသဘောနဲ့ ပြောသလဲတော့ မသိဘူး။
"ကြံ့ဖွတ် တွေ ကောင်းစားဖို့ မသိ နားမလည်တဲ့ ၉၆၉ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ မသိ နားမလည်တဲ့ ပြည်သူတွေက လူမိုက် လုပ်ပေးနေတာပဲ" ။
ဦးပဏ္ဍ၀ံသ ၉၆၉ ကို လက်မခံ says:
ဦးပဏ္ဍ၀ံသ ၉၆၉ ကို လက်မခံ
"၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုအပေါ် လုံးဝ အယုံအကြည် မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ ဒီ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုက တရားနှလုံးသွင်းဖို့ ဒါမှမဟုတ် ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ပြန့်ပွားဖို့သာ ဆိုယင် သိပ်ကောင်းတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် အခု ဘာဖြစ်လာသလဲ။ လူတစ်ချို့က ၉၆၉ ကို အကာအကွယ်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုပြီး ဘာသာရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကို အရှိန်မြှင့်တင်လာတယ်၊ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလာအောင် ဖန်တီးနေကြတယ်။
ဒါဟာ (သူတို့ ၉၆၉ တွေ ပြောတဲ့) "၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုရဲ့ မူလလမ်းစဉ်" ကနေ သွေဖည်နေတာပါဘဲ။
၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကို လုပ်နေတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေက တိုင်းပြည်ကို မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပွားစေလိုတဲ့ လူတစ်ချို့ရဲ့ ဓားစားခံများသက်သက် ဖြစ်နေတာပါ။
လက်ရှိ ဗမာတွေက မွတ်စလင်တွေကို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ် ဖျက်ဆီး မီးရှို့နေတဲ့ပုံစံကို လေ့လာကြည့်ယင် အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ စံနစ်တကျ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်၊ ပြီးတော့ သူတို့နောက်မှာ ကြိုးကိုင်သူ ရှိနေတယ်။
မွန်ပြည်နယ်မှာ ဟောပြောထားတဲ့ ၉၆၉ ဒီဗီဒီခွေ သုံးသောင်းကျော်ကို ရန်ကုန်မြို့ထဲ ဖြန့်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါဟာ အလွန်များပြားတဲ့ပမာဏ ဖြန့်ချိနိုင်အောင် တာဝန်ယူကျားကန်ပေးသူ(sponsor) ရှိကြောင်း ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားပါ။
ဝီရသူ အပါအဝင် ၉၆၉ ရဟန်းသံဃာတွေက မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ဖို့ဟောပြောနေတာ သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်များနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတယ်။ ဝိနည်းနဲ့ မညီဘူး။
ဘုန်းဘုန်း မနှစ်မြို့တဲ့ အချက်တစ်ခု ရှိတယ်။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ လက်ပံတန်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း အပေါ် ရဟန်းသံဃာ အပါအ၀င် ဆန္ဒပြကြသူတွေကို အစိုးရက အလွန်အကျွံ အင်အားသုံး ဖြိုခွဲခဲ့တယ်။
မိတ္ထီလာမှာ မွတ်စ်လင်မ်တွေကို အာဏာပိုင်တွေ၊ ရဲတွေ မျက်စေ့ရှေ့မှာ ရိုက်နှက်၊ သတ်ဖြတ်၊ အရှင်လတ်လတ် မီးလောင်တိုက်သွင်းနေတဲ့ကိစ္စကျတော့ လူသတ်သမားတွေ၊အကြမ်းဖက်သမားတွေကို တားဆီးဖို့ သေနတ်တစ်ချက်မှမဖောက်ခဲ့ဘူး။"
ဘာသာခြား မျိုးစုံ ရှိရဲ့သားနဲ့ "မဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ" တည်တောင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီတိုင်းပြည်ဟာ သာယာငြိမ်းချမ်းမှာ မဟုတ်တော့ဘူး says:
June 29, 2013 at 12:44 AM Reply
Ko Htike said...
တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ ရှိရဲ့သားနဲ့ ... ဗမာတွေပဲ ကြီးစိုးရမယ်ဆိုပြီး မဟာ ဗမာနိုင်ငံတည်ထောင်မယ်ဆို အဲဒီတိုင်းပြည်ဟာ သာယာ ငြိမ်းချမ်းမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ဖို၊ မ မတူ ကွဲပြားမှု ရှိရဲ့သားနဲ့ ... ဖိုသတ္တဝါတွေ ကြီးစိုးရမယ့် မဟာဖိုဝါဒ နိုင်ငံ တည်ထောင်မယ်ဆို အဲဒီတိုင်းပြည်ဟာ သာယာငြိမ်းချမ်းမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ဘာသာခြား မျိုးစုံ ရှိရဲ့သားနဲ့ "မဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ" တည်တောင်မယ် ဆိုရင် အဲဒီတိုင်းပြည်ဟာ သာယာငြိမ်းချမ်းမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
June 29, 2013 at 1:02 AM Reply
နှစ်ပေါင်းများစွာ ခေါက်ရိုးကြေနေတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေထဲက မထွက်နိုင်တော့ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေက အမျိုးသားရေးလား၊ "မိမိကိုယ်ကို အထီးကျန်စေရေး" လား ဆိုတာကို မခွဲခြားနိုင်တော့ဘူးလေဗျာ။
"မဟာဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်ကြီး" မှာ မနေဝံ့တော့လို့ တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာ လူနည်းစု ဗမာ အနေနဲ့ပဲ အေးအေးချမ်းချမ်း သွားနေတော့မယ် says:
June 29, 2013 at 2:01 AM Reply
"မဟာဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ" မှာ နိုင်ငံသား မဖြစ်ချင်တော့ပါ
ဒီပုံအတိုင်း ... ဆက်ပြီး တိုးနေရင် "မဟာဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ" မှာတော့ နိုင်ငံသား မဖြစ်ချင်တော့တာကြောင့် ကချင်နိုင်ငံ ၊ ချင်းနိုင်ငံ ၊ ..... များ ပေါ်ပေါက်လာရင် ... အဲဒီ နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပါရစေလို့ ကြိုတင် တောင်းဆိုပါရစေ။
ရှမ်းနိုင်ငံသား ဆိုလည်း မဆိုးလှပါဘူး။ အမြင်ကျဉ်းတဲ့ "မဟာဗမာတွေ ကြီးစိုးအောင် လုပ်မှု" ကနေ ဝေးပြီး ... တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာ လူနည်းစု အနေနဲ့ပဲ အေးအေးချမ်းချမ်း သွားနေတော့မယ်။
ကချင်နိုင်ငံ မှာ (ဗမာလူနည်းစု အဖြစ်) သွားနေလို့ မဟာကချင်နဲ့ တိုးတာ ကိစ္စ မရှိဘူးဗျ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ... သူတို့ လုပ်တာ ကျွန်တော် လုပ်တာ မဟုတ်လို့ပဲ။ ကျွန်တော်က လူများစု (ဗမာ) ကနေ အနိုင်ကျင့်တဲ့ (ဗမာ) တစ်ယောက် အဖြစ် ပါနေရမှာကို ရှက်တာပါပဲ။ မဟာကချင်က (ဗမာလူနည်းစုကို) အနိုင်ကျင့်လို့ ... ကိုယ် (ဗမာလူနည်းစု) က ခံရတာ ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ် (ဗမာလူများစု) က လူနည်းစုကို အနိုင်ကျင့်ရတာကို ရှက်တာ။ ကျွန်တော် ခရစ်ယန်တွေ အများကြီးနဲ့ နေဖူးပါတယ်။ ... ကျွန်တော် ပြောတာ ကုန်နေပါပြီ။ သူတို့ ကချင် ခရစ်ယန်တွေက (ဗမာလူနည်းစုကို) အနိုင်ကျင့်ခဲ့ရင် သူတို့ သမိုင်း။ ကျွန်တော်နဲ့ မဆိုင်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော် (ဗမာ) က (ဗမာလူများစု အဖြစ်) သူများ (လူနည်းစု) ကို အနိုင်ကျင့်ရမှာကို ရှက်တာ။ ဒီထက် ရှင်းတာ မရှိတော့ဘူး။
သေချာတာကတော့ "မဟာဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်ကြီး" မှာ .... မနေဝံ့လို့ ... လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့သာ နေပါရစေတော့။
အတ္တ လောဘတွေ များနေတဲ့ "မဟာဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ" မှာတော့ မနေချင်တာ ရွေးချယ်ခွင့်ပါပဲ။ အစွန်းရောက် မျက်ကန်းမျိုးချစ် တလွဲဆံပင်ကောင်း လူတတ်ကြီးတွေ များတဲ့ "မဟာဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ" မှာ နိုင်ငံသား ဖြစ်တာထက် ... ဘာသာခြား ကိုးကွယ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ နိုင်ငံ တည်ထောင်လာနိုင်တဲ့အခါ အဲဒီနိုင်ငံမှာ လူနည်းစုအဖြစ် နေဖို့ ခွင့်တောင်းတာပါပဲ။
"မွတ်ဆလင်တွေကို နေစရာ မရှိအောင် လုပ်ပြမယ်၊ စားစရာ မရှိအောင် လုပ်ပြမယ်" လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာက သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ နဲ့ ကင်းကွာပြီး ဟောကြားတာမျိုးကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့ မရပါ says:
သေချာတာက ... သူများ အကျိုး ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းကို နှုတ်က ဖွင့်ဟ ပြောတဲ့ အထိ ဟောကြားတဲ့ စကားတွေကိုတော့ ... လက်ခံလို့ မရတာတော့ .... သေချာလွန်းနေတယ်။
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ရှိသူတွေကို အပြစ် မပြောပါဘူး။ ... သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ နဲ့ ကင်းကွာတဲ့ စကားတွေကိုသာ ရှက်မိတာပါပဲ။
ဥပမာ ... "မွတ်ဆလင်တွေကို နေစရာ မရှိအောင် လုပ်မယ်၊ စားစရာ မရှိအောင် လုပ်မယ်" ဆိုတာမျိုးတွေ၊ ... ကာယကံ၊ ဝစီကံမှာ အတော် ထိခိုက်နေပြီ။
(မှတ်ချက် - "မွတ်ဆလင်တွေကို နေစရာ မရှိအောင် လုပ်ပြမယ်၊ စားစရာ မရှိအောင် လုပ်ပြမယ်" လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီး ဦးဝီရသူ ပြောထားတဲ့ ဗီဒီယို
ကို ရည်ညွှန်းပြီး ထောက်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
"မထောက်ခံရင် မဲ မရအောင် လုပ်မယ်" ဆိုတော့ ... မေတ္တာရှင်လား ... အာဏာရှင်လားတောင် ခွဲမရတော့ဘူး။ အဲဒါ ပြဿနာပဲ။
(မှတ်ချက် - "မျိုးစောင့်ဥပဒေကို လွှတ်တော်မှာ ကန့်ကွက်တဲ့အမတ် ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲမရရန် စည်းရုံးမယ်" လို့ မြစေတီဆရာတော် မိန့်ကြားထားတဲ့ ဗီဒီယို
ကို ရည်ညွှန်းပြီး ထောက်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
မေတ္တာရှင် ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်တွေက အာဏာရှင် ဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်ဆိုးထဲမှာ .... ရိုးသားတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့သာ ပျော်မွေ့တော့မယ်။
သူများ အပြစ်ကို ကျူးလွန်တိုင်း ကိုယ်က လိုက်ကျူးလွန်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပီသပါဦးမလား။ "သူများတွေ အရက်သောက်တာ ဆိုးလို့ ... ငါလည်း သောက်မယ်" ဆိုတာမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မရှိဘူးနော်။ "မူးပြီး ရစ်လို့ .... သောက်ပြီး ပြန်ရစ်မယ်" ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လုပ်လို့ မရဘူး။
ရဟန္တာမှ ဆင်ခြင် နိုင်မယ် ဆိုရင် ...အဲဒီဘာသာ ပျက်ပြီပဲ။ ရဟန္တာ မဟုတ်လို့ လုပ်ချင်ရာ လုပ်လို့ ရသလို ဖြစ်နေပြီ။
"မဟာဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ" တကယ် ဖြစ်လာခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်မ ကရင်နိုင်ငံသားပဲ လုပ်တော့မယ် says:
June 29, 2013 at 2:31 AM Reply
ဒီလို "မဟာဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ" အခြေအနေအထိ ဖြစ်လာတယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်မက နဂိုကတည်းက ကရင်နယ်မြေမှာ ၁၀ နှစ် နေလာဖူးတော့ ကရင်နိုင်ငံသားပဲ လုပ်တော့မယ်။
June 29, 2013 at 1:58 PM Reply
မငယ်နိုင် နှင့် ကိုထိုက်
အစ်မတို့၊ အစ်ကိုတို့လို ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို သေသေချာချာ သဘောပေါက်ပြီး လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့်သုံးတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗမာ တွေလဲ
"မဟာဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်ကြီး" မှာ ဘယ်လိုမှ နေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီလို ဖြစ်လာခဲ့ရင် "လွတ်လပ်သော ကော်သူလေ သမ္မတနိုင်ငံ" ကို လာခဲ့ကြပါဗျာ။
အစ်မတို့၊ အစ်ကိုတို့ကို "လွတ်လပ်သော ကော်သူလေ သမ္မတနိုင်ငံ" မှ ကြိုဆိုနေပါတယ်။ :)
" `မဟာဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ´ မှာ နိုင်ငံသား မဖြစ်ချင်တော့ပါ" (Ko Htike စတေးတပ်) အောက်မှ မှတ်ချက် အချို့ says:
June 29, 2013 at 2:24 PM Reply
Ko Htike - ဒီပုံအတိုင်း ... ဆက်ပြီး တိုးနေရင် `မဟာဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်ကြီး´ မှာတော့ နိုင်ငံသား မဖြစ်ချင်တော့တာကြောင့် `ကချင်နိုင်ငံ´၊ `ချင်းနိုင်ငံ´ ..... များ ပေါ်ပေါက်လာရင် ... အဲဒီ နိုင်ငံ တစ်ခုခုမှာ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပါရစေလို့ ကြိုတင် တောင်းဆိုပါရစေ။
Ko Htike - သေချာတာကတော့ `မဟာဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်ကြီး´ မှာ .... မနေဝံ့လို့ ... လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့သာ နေပါရစေတော့။
Naw Hpu Gam - ကချင်နိုင်ငံမှ ကြိုဆိုပါတယ်
Aldo Sawaldo - ကရင်နီနိုင်ငံကနေ ကြိုဆိုမယ်.. ကိုထိုက်..
Sophy Angel - ရှမ်းနိုင်ငံကလည်း ကိုထိုက်ကို ကြိုဆိုပါတယ်
Thaw Thi Kho - Welcome to Kaw Thoo Lei
မူဆလင်တွေ၊ တခြားဘာသာခြားတွေအပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်ပြီး `ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာ´ လုပ်လိုက်ရင် ကျုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗမာတွေဟာ ခွေးလောက်တောင် သောက်သုံးမကျတဲ့ အကောင်တွေ ဖြစ်သွားကြမှာပေါ့။ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) says:
June 29, 2013 at 4:03 PM Reply
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ထဲမှာ အလောင်းဘုရား လက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့ကြတဲ့ မူဆလင်တွေ၊ ဘုရင်ဂျီတွေ၊ နတ်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ တောင်တန်းသားတွေ၊ ခရစ်ယာန်တွေ အပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်ပြီး `ငါတို့ လူများစုရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာ ဖြစ်ရမယ်´ လို့ လုပ်လိုက်ရင် ကျုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗမာတွေဟာ ခွေးလောက်တောင် သောက်သုံးမကျတဲ့ အကောင်တွေ ဖြစ်သွားကြမှာပေါ့။ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း)
နိုင်ငံတော်ဘာသာကို ဗုဒ္ဓဘာသာ လုပ်ရန် ဒီးဒုတ်ဦးဘချို ကြံစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက သည်လို ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဗျ.........
"ဒီမှာ ဆရာ၊ ကျွန်တော်တို့က လူကြိုက်အောင် လုပ်နေကြတာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီလို မဟုတ်မဟတ်ကို စိတ်ထင်ရာတွေ လျှောက်လုပ်နေကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကြီးဟာ မကြာမီ ပျက်စီး ပြိုကွဲပြီး ကျွန်သဘောက် ဖြစ်သွားကြမှာဘဲ။
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ထဲမှာ အလောင်းဘုရား လက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့ကြတဲ့ မူဆလင်တွေ ရှိတယ်၊ ဘုရင်ဂျီတွေ ရှိတယ်၊ အစကတည်းက ရှိလာခဲ့ကြတဲ့ နတ်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ တောင်တန်းသားတွေ ရှိတယ်။ တချို့ ခရစ်ယာန်တွေ ဖြစ်ပြီး အရိုးစွဲနေကြတာတွေ ရှိတယ်၊ သူတို့တတွေဟာလဲ အားလုံး နိုင်ငံသားတွေဘဲ၊ တိုင်းပြည်ကို ကျွန်တွင်းက လွတ်အောင် တိုက်ထုတ်ကြတုန်းက ကျွန်တော်တို့ချည်း မဟုတ်ဘူး၊ သူတို့တတွေပါ ပါကြပါတယ်။
အခု ကျွန်တွင်းက လွတ်မယ်မှ မကြံသေးဘူး၊ သူတို့တတွေ အပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်ပြီး `ငါတို့ လူများစုရဲ့ ဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာ ဖြစ်ရမယ်´ လို့ လုပ်လိုက်ရင် ကျုပ်တို့ဟာ ခွေးလောက်တောင် သောက်သုံးမကျတဲ့ အကောင်တွေ ဖြစ်သွားကြမှာပေါ့။
ဆရာ တိုင်းပြည်ကို တိုင်းပြည်ရေး လို့ တွေးစမ်းပါ။ ဘာသာတွေ၊ ဘာတွေ၊ ညာတွေ လုပ်မနေပါနဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်တခုလုံး စည်းရုံးနေဘို့ လိုတယ်။"
`အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာ´ ဆိုတာတွေဟာ ရှေးရှေး ပဒေသရာဇ် မင်းတရားကြီးတွေရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ဘဝင်လေပင့်ပြီး ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေပါ။
အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လိုကြတာက ပြည်ထောင်စုကြီးထဲမှာ ရှိနေကြတဲ့ လူမျိုးအားလုံး၊ ဘာသာအားလုံး ဘယ်တော့မှ မပြိုကွဲဘဲ ခွဲထွက်သွားမဲ့ လူတွေ ပေါ်မလာစေဘဲ နိုင်ငံစိတ်ဓါတ် တခုထဲ ရှိနေအောင် သွင်းပေးဘို့၊ စည်းရုံးပေးဘို့ လိုတယ်.."
နိုင်ငံတော်ဘာသာ ကို ဗုဒ္ဓဘာသာ လုပ်ချင်ရင် ဆရာကိုယ်တိုင် `ဘဝရှင်မင်းတရားကြီး´ အမည်ခံပြီး သာသနာ့ဒါယကာတော် တက်လုပ်။ ပြီးတော့ "စည်းကုံး၊ ခရိုင်နဲ့တကွ စိုးမိုး အုပ်ချုပ်တော်မူသော `သီရိပဝရ ဓမ္မရာဇာ ဘဝရှင်မင်းတရားကြီး သာသနာ့ဒါယကာ ဘချို´ ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်" လို့ ဆရာ့ဟာ ဆရာ ကြေညာ၊ ကျွန်တော် မပါဘူး။ "
(၂-၉-၁၉၆၀ ရက်နေ့ထုတ် မီးဒုတ် သတင်းစာမှ)
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပြဿနာတွေ ပွားအောင် တမင်သက်သက် ယုတ်မာစွာ လိမ်လည် လုပ်ကြံ ရေးသားထားသော "ရခိုင်" နာမည်သုံး စာမျက်နှာ တစ်ခု says:
December 10, 2013 at 1:19 PM Reply
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပြဿနာတွေ ပွားအောင် တမင်သက်သက် ယုတ်မာစွာ လိမ်လည် လုပ်ကြံ ရေးသားထားသော "ရခိုင်" နာမည်သုံး စာမျက်နှာ တစ်ခု
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်
ဂျပန်တွေက အရူးထပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ ခွဲစိပ်တာ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို အလှဖေါ်တာမျိုးတွေ လုပ်ကြတယ်။
အဲဒီထဲမှာ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က ဘာအတွက် လုပ်တာလဲ မသိဘူး။ သူ့ နှုတ်ခမ်းကို အပ်ချည်နဲ့ချုပ်တယ်။ မျက်လုံး တစ်ဖက်ကို ချုပ်ထားတယ်။ သွေးတွေလည်း မျက်နှာမှာ ပေနေတယ်။ အဲဒီလို အခြား လူတွေလည်း လျှာကို နှစ်ခွ ဖြစ်အောင် ခွဲစိပ်ထားတာတွေ၊ အရေပြားကို ဖေါက်ပြီး ကျောမှာ ဖဲပြားလို ထိုးပြီး တပ်တာတွေ၊ နှဖူးမှာ ဘုကြီးတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်တာတွေ မျိုးစုံပဲ။
ဒါကို .... ဘုရားပုံနဲ့ ဘုန်းကြီး ပုံတွေ ပရိုဖိုင်နဲ့ cover မှာ တပ်ထားတဲ့ "ရခိုင်" နာမည်သုံး စာမျက်နှာ တစ်ခုက .... အဲဒီထဲက ... နှုတ်ခမ်းကို အပ်ချည်နဲ့ ချုပ်၊ မျက်လုံးကို ချုပ် ထားတဲ့ ကောင်မလေးပုံကိုယူပြီး ... ... ဒီလို ရေးထားတယ်။ .....
" ..... ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီး အိမ်ဖော်မလေးက ယေရှုခရစ်တော်ကိုသာ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသဖြင့် အိမ်ရှင် ဆော်ဒီမိသားစုက သူမ၏ ပါးစပ်နှင့် ဘယ်ဘက်မျက်ခမ်းများကို ပလတ်စတစ်ကြိုးနှင့် ချုပ်၍ အပြစ်ပေး .... " တဲ့။
မွတ်ဆလင် နဲ့ ခရစ်ယန်ကို ရန်တိုက်ပေးထားတယ်။ ဒါကို ယုံတဲ့ လူက ယုံတယ်။ ဆဲတဲ့ လူက ဆဲတယ်။ ရှယ်တဲ့ လူက ၉၀၀ ကျော်တယ်။
ဒါဟာ တိုင်းပြည်မှာ ပြဿနာတွေ ပွားအောင် သက်သက် ယုတ်မာနေကြတာဆိုတာ အသိသာကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီလို ကိစ္စတွေကို သတိထားနိုင်ကြဖို့ ပြန်လည် ဖြန့်ဝေလိုက်ရပါတယ်။
သက်သေ လင့်များကိုပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
(သတိ ပုံများမှာ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေသော သွေသံရဲရဲ ပုံများ ပါကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါတယ်။)
(လိမ်လည် လုပ်ကြံရေးသားထားသော "ရခိုင်" နာမည်သုံး စာမျက်နှာ)
" ..... ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီး အိမ်ဖော်မလေးက ယေရှုခရစ်တော်ကိုသာ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသဖြင့် အိမ်ရှင် ဆော်ဒီမိသားစုက သူမ၏ ပါးစပ်နှင့် ဘယ်ဘက်မျက်ခမ်းများကို ပလတ်စတစ်ကြိုးနှင့် ချုပ်၍ အပြစ်ပေး .... " ဟု မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပြဿနာတွေ ပွားအောင် တမင်သက်သက် ယုတ်မာစွာ လိမ်လည် လုပ်ကြံ ရေးသားထားသော "ရခိုင်" နာမည်သုံး စာမျက်နှာ
အဆိုပါ ဓါတ်ပုံတွေပါသော မူရင်း အင်တာနက် စာမျက်နှာ။
ပေါင်မုန့်ဝိုင်းပုံ နဖူး ဖက်ရှင် -
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ခေတ်စားနေသော နဖူးထဲသို့ ဆားရည် ထိုးသွင်းပြီး ပေါင်မုန့်ဝိုင်းပုံ နဖူး ဖြစ်လာအောင် လုပ်ယူသော ဖက်ရှင်
လစ်ဘရယ် မျက်မှန်နဲ့ လူ (ကိုကိုမောင်) says:
December 16, 2013 at 4:00 PM Reply
လစ်ဘရယ် မျက်မှန်နဲ့ လူ
ချာလီ ချက်ပလင် တွေ ရှားပါးလာပြီး
ဟစ်တလာ တွေ များများလာတဲ့
ဒီကမ္ဘာမှာ......... ငါ မပျော်ပိုက်တော့ဘူး.......။
"ကိုယ့်နံရိုး ကိုယ် စည်းရိုးထိုးမယ်" ကြွေးကြော်ပြီး
သူများ အရိုးနဲ့ သွားကြားထိုးချင်တဲ့ လူတွေအကြား
ငါ့ ရပ်တည်ချက်က... ဈေးကွက်ထဲမှာ အရောင်းမသွက်တော့....။
ဟောဒီ အဝေးကြည့် ပါဝါ ၂၀၀ ကျော် မျက်မှန်နဲ့ကြည့်လည်း...
လူကို.... လူ လို့ပဲ ငါမြင်တယ်.......
ဟောဒီ သုံးကြိမ်တိတိ ခွဲစိတ်ခံဖူးတဲ့ အဝေးမှုန် မျက်လုံး (၂) လုံးနဲ့ကြည့်လည်း...
ဟုတ်တယ်....... ငါက "သစ္စာဖောက်" ပါ....
ဟုတ်တယ်....... ငါက "လစ်ဘရယ်" ပါ.....
ဟုတ်တယ်....... ငါက "လော်ဘီ" ပါ.......
အမျိုးမျိုး ယိုးစွပ်ကြ... ခေါင်းစဉ်တပ်ကြ....
"ကမ္ဘာကြီး လုံးတယ်" ပြောမိကြလို့
အံသြစရာ ပုံပြင်မှ မဟုတ်တာပဲလေ.....။
လစ်ဘရယ် မျက်မှန်နဲ့ လူ (ကိုကိုမောင်)
"အမျိုး မြတ်သည်" ဆိုသည်မှာ မရှိ ၊ "အကျင့် မြတ်သည်" ဆိုသည်သာ ရှိသည်။ says:
December 29, 2013 at 2:52 AM Reply
"အမျိုး မြတ်သည်" ဆိုသည်မှာ မရှိ ၊ "အကျင့် မြတ်သည်" ဆိုသည်သာ ရှိသည်။
▀ ဗုဒ္ဓ ၏ သာသနာ ▀
အမျိုး မြတ်သည် မရှိ ၊
အကျင့် မြတ်သည်သာ ရှိသည်။
စိတ်၏ နေအိမ် ။
သိမြင် စေနိုင်သော ပညာရေး မဏ္ဍိုင်။
ဘာသာရေး နှင့် လုံးဝ မရောယှက်ပါ။
ဗုဒ္ဓ ၏ လူမျိုး မဟုတ်။
ဗုဒ္ဓ ၏ သာသနာ နှင့် နေသူ ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓ ၏ အဆုံးအမ ၌ နေသူ ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓ ၏ အဆုံးအမ ၌ ယုံကြည်သူ၊
ကျင့်ကြံသူ ၊ ပြောဆို နေထိုင်သူ ဖြစ်သည်။
လူမျိုး နှင့် ဘာသာ သည်
သီးခြားစွာ တည်ရှိသည်။ ။
Credit >>>( ဒေးဗစ်အောင် )<<< ထံမှ ကူးယူ ထပ်မံဖော်ပြပါသည်။
January 29, 2014 at 3:06 AM Reply
February 2, 2014 at 9:50 AM Reply
မြန်မာ မွတ်စလင်မ် များအား နာဇီ လုပ်ထုံးများ ဖြင့် စနစ်တကျ ညှဉ်းပမ်းနေသည် (၂) says:
February 2, 2014 at 9:56 AM Reply
February 6, 2014 at 11:40 PM Reply
February 7, 2014 at 12:19 AM Reply
မွတ် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဆီမဆိုင် အပြစ်တင် အပုပ်ချနေကြတဲ့ မျိုးစောင့်သံဃာတွေနဲ့ ကြံ့ဖွတ် တွေအနေနဲ့ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုနဲ့ စဉ်းစားပီးမှ ပြောပါ
February 7, 2014 at 12:26 AM Reply
February 7, 2014 at 2:49 PM Reply
အခြား မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မှ မတွေ့ရဘဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာ တွေ့နိုင်သော ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ် အမြောက်အမြားထဲမှ အံ့ဖွယ် (၉) ပါး says:
February 8, 2014 at 8:20 AM Reply
February 11, 2014 at 6:36 AM Reply
February 14, 2014 at 12:19 AM Reply
February 14, 2014 at 12:48 AM Reply
March 4, 2014 at 7:16 AM Reply
March 11, 2014 at 7:37 AM Reply
တိုင်းပြည်က ချွတ်ချုံကျပြီး ပြည်သူတွေက နိုင်ငံခြားမှာ ကျွန်ခံနေရချိန်မှာ ဒေါ်လာ သန်းချီ ချမ်းသာပြီး သားသမီးတွေကို ဟယ်လီကော်ပတာ ၀ယ်ပေး၊ ပြိုင်ကား ၀ယ်ပေးနေတဲ့ အာဏာရူးတသိုက်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား အပြီးတိုင် ဖြုတ်ချကြပါ
March 26, 2014 at 7:09 PM Reply
April 11, 2014 at 6:21 AM Reply
August 22, 2014 at 7:27 PM Reply
September 30, 2014 at 11:33 AM Reply
October 5, 2014 at 7:54 AM Reply
စစ်အုပ်စု မျက်နှာဖုံး ကွာကျသွားပြီး အစွယ်တငေါငေါ ပေါ်လာပြီ၊ ဒါမျိုးတွေ ထပ်ဖြစ်လာဦးမယ် says:
September 2, 2015 at 6:31 AM Reply
ဒီမိုကရေစီအစိုးရအယောင်ဆောင် စစ်အုပ်စု ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ အသုံးချခံတွေ မျက်နှာဖုံး ကွာကျသွားပြီး အစွယ်တငေါငေါ ပေါ်လာပြီ၊ ဒါမျိုးတွေ ထပ်ဖြစ်လာဦးမယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်
September 25, 2015 at 9:44 AM Reply
October 6, 2015 at 2:57 AM Reply
August 21, 2016 at 4:01 AM Reply